Comedyနဲ့ Drama အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားရစေမယ့် Friendzone ရုပ်ရှင် - For her Myanmar
သူငယ်ချင်းမက ရည်းစားမကျတွေ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်နော်
ထိုင်းဟာသကား ဆို အိုဗာအိုက်တင်တွေများလို့ အက်ဒ်မင် သွားမကြည့်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မနေ့က သွားကြည့်ခဲ့တဲ့ friendzone ရုပ်ရှင်ကတော့ အက်ဒ်မင့်ရဲ့ စိတ်အစုံကို ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အထိ ဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ ဟာသကားကောင်းမို့ reviewလေး ရေးပါရစေ….
နီးချင်ရက်နဲ့ မနီးနိုင်ဘဲ ဟိုမရောက်၊ဒီမရောက် ခြေချုပ်ခံနေရတဲ့ ဘဝဟာ friendzone ပါ။ ဒါကြောင့် Friendzone ဆိုတာ ထောင် အမျိုးအစားနောက်တစ်မျိုးလို့ ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ယောင်းတို့သိပါသလား တချို့Friendzoneတွေဟာ ချစ်မိသူကိုယ်တိုင်က တည်ဆောက်ခဲ့တာကြောင့် မဝေးချင်ဘဲ ဝေးသွားရတယ် ဆိုတာ ….
ဟုတ်ပါတယ်။ အခု အရမ်းရေပန်းစားနေတဲ့ ” Friendzone” ရုပ်ရှင် ဟာ ကိုယ်တိုင်က ချစ်ပါရက်နဲ့ friendzone ဆောက်မိလို့ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုလောက်ထိ မဝေးသင့်ဘဲ ဝေးသွားကြသူ နှစ်ဦးအကြောင်းကို ဟာသ နဲ့ ဒရာမာ နှောပြီး ရိုက်ထားတာပါ။
အချိန်ကာလကတော့ ၂၀၀၉ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး အထက်တန်းကျောင်းတက်နေတဲ့ Palm( Nine) နဲ့ Gink (Baifern) ဟာ partners-in-crime လို့ ဆိုရမယ့် သူငယ်ချင်း၂ယောက်ပါ။ ဘာမဆို တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်ပြီး ပြဿနာရှာတတ်တဲ့ Gink ရဲ့ အနားမှာ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ Palm ဟာ ကြံရာပါအဖြစ် အမြဲတမ်းရှိနေတတ်ပါတယ်။
Related article>>>ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအတွက်ဆို ဒီရုပ်ရှင်(၂)ကားကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
Palm ဟာ Gink ကို ၁၅၀၀အချစ်နဲ့ တိတ်တဆိတ်ချစ်နေခဲ့ပေမဲ့ relationship အဆင့်ထဲ မဝင်ဘဲ “friendzone”ထဲမှာနေခြင်းကသာလျှင် Gink နဲ့ ဘယ်တော့မှ မပြတ်တဲ့နည်းလို့ သတ်မှတ်ထားသူပါ။
Palm တစ်ယောက်မသိတာကတော့ Gink ကလည်း သူ့ကို ချစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကို မသိတဲ့ Palm ဟာ Gink ကို “သူငယ်ချင်းလို ချစ်ပါတယ်” လို့ စကားပြော မှားသွားခဲ့ပါတယ်။
Palmပြောသွားတာတော့ စကားလေး တစ်ခွန်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခွန်းကပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကို နောက်ဆယ်နှစ်အထိ ဝေးသွားစေခဲ့ပါတယ်။
နောင်ဆယ်နှစ်နေလို့ ၂၀၁၉ရောက်တဲ့အခါ Palm လည်း ဆိုင်သူရည်းစားရှိနေပြီး Gink မှာလည်း အတူနေ ချစ်သူရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ Palm တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ငယ်ချစ်ဦး Gink ကို ဒီထက်ပိုပြီး လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့မှန်း သိလာတဲ့အခါ…. Palm အနေနဲ့ Friendzone ထဲကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ပါ့မလား….
Palm ဘက်ကစပြီး Friendzone ကန့်ခဲ့တာကြောင့် Palm ကို “လိုသုံး” လိုသာ သဘောထားတော့တဲ့ ခေါင်းမာသူ တစ်ဇွတ်ထိုးမိန်းကလေး Gink နဲ့ကော ပြန်နီးစပ်နိုင်ပါ့မလား?
Palm တစ်ယောက် ဆယ်နှစ်လောက် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Friendzone ကို Gink နဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုး ချေဖျက်သွားလဲဆိုတာ
ဟာသနဲ့ ဒရာမာ ရောနှောပြီး ကြည့်ရှုရမှာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းကို ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မလေးရှား၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအထိ နိုင်ငံပေါင်းစုံရဲ့ အလှဆုံး နေရာတွေမှာ သေချာ လာရိုက်သွားတာမို့ အတော်လေး ကြည့်ပျော်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါ။
နောက်ပြီး ဒီထိုင်းရုပ်ရှင်ရဲ့ ထူးခြားချက်က တခြားထိုင်းဟာသ/သရုပ်ဆောင်တွေလို အိုဗာအိုက်တင်၊ အိုဗာမိတ်ကပ်အပြင်အဆင် လုံးဝမဖြစ်ဘဲနဲ့ အစကနေ အဆုံးအထိ သဘာဝကျကျ ခံစားရအောင် သေချာအားထုတ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
Related article>>>ယောင်းယောင်းတို့ပြောတဲ့ အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်တွေ အကြောင်း
Comedy အရသာကို အပြည့်အဝခံစားရစေတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်မှာ ရိုးရှင်းတဲ့ဒိုင်ယာလော့ခ်လေး တစ်ကြောင်းကအစ အူတက်နေအောင် ရယ်ရပါတယ်။ ပြဿနာအိုးမလေး Gink နားမှာ တွယ်ကပ်နေရင်းနဲ့ Palm တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ ဒုက္ခရောက်ရလဲဆိုတာကို နိုင်ငံပေါင်းစုံအထိ သွားပြီး သဘာဝကျကျ ရိုက်ထားတာပါ။ (အက်ဒ်မင်ဆို အရယ်လွန်သွားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မနည်းပြန်ထိန်းရတယ်:3 )
ရယ်လည်းရယ်ရသလို အတော်လေးလည်း ရင်ထဲနင့်နေအောင်ကြေကွဲရတဲ့ ဇာတ်လမ်းဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လူတွေ မမြင်ကြတဲ့၊ ဟာသလို သဘောထားကြတဲ့ Friendzone သမား တစ်ယောက်ရဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေ၊ ကြေကွဲမှု ဒုက္ခတွေ၊ မချိတင်ကဲဖြစ်မှုတွေကို ဒီရုပ်ရှင်က ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် ရိုက်ပြထားလို့ပါပဲ။
Friendzoneထဲက ရုန်းထွက်သင့် မထွက်သင့် ဝေခွဲရခက်နေသူတွေ ဆို ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရသွားမှာပါ
ရုပ်ရှင်က နှစ်နာရီတောင်ကြာပေမဲ့ အချိန်ကုန်လို့ကုန်သွားမှန်း တောင် သိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရုံထဲမှာ အကျယ်ကြီး မရယ်မိဖို့ရယ်၊ မျက်ရည်သုတ်ဖို့ တစ်ရှူးအဆင့်သင့်ဆောင်ထားဖို့ပဲ ပြောပါရစေ….
Reference: imdb.com mydramalist.com
Photo reference: Mingalar Cinema
သူငယျခငျြးမက ရညျးစားမကတြှေ ကွညျ့ကိုကွညျ့သငျ့ပါတယျနျော
ထိုငျးဟာသကား ဆို အိုဗာအိုကျတငျတှမြေားလို့ အကျဒျမငျ သှားမကွညျ့ဖွဈတာ ကွာပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ မနကေ့ သှားကွညျ့ခဲ့တဲ့ friendzone ရုပျရှငျကတော့ အကျဒျမငျ့ရဲ့ စိတျအစုံကို ချေါဆောငျသှားတဲ့အထိ ဆှဲဆောငျခဲ့တဲ့ ဟာသကားကောငျးမို့ reviewလေး ရေးပါရစေ….
နီးခငျြရကျနဲ့ မနီးနိုငျဘဲ ဟိုမရောကျ၊ဒီမရောကျ ခွခြေုပျခံနရေတဲ့ ဘဝဟာ friendzone ပါ။ ဒါကွောငျ့ Friendzone ဆိုတာ ထောငျ အမြိုးအစားနောကျတဈမြိုးလို့ ဆိုတတျကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ယောငျးတို့သိပါသလား တခြို့Friendzoneတှဟော ခဈြမိသူကိုယျတိုငျက တညျဆောကျခဲ့တာကွောငျ့ မဝေးခငျြဘဲ ဝေးသှားရတယျ ဆိုတာ …..
ဟုတျပါတယျ။ အခု အရမျးရပေနျးစားနတေဲ့ ” Friendzone” ရုပျရှငျ ဟာ ကိုယျတိုငျက ခဈြပါရကျနဲ့ friendzone ဆောကျမိလို့ ဆယျစုနှဈတဈစုလောကျထိ မဝေးသငျ့ဘဲ ဝေးသှားကွသူ နှဈဦးအကွောငျးကို ဟာသ နဲ့ ဒရာမာ နှောပွီး ရိုကျထားတာပါ။
အခြိနျကာလကတော့ ၂၀၀၉ခုနှဈဖွဈပွီး အထကျတနျးကြောငျးတကျနတေဲ့ Palm( Nine) နဲ့ Gink (Baifern) ဟာ partners-in-crime လို့ ဆိုရမယျ့ သူငယျခငျြး၂ယောကျပါ။ ဘာမဆို တဇှတျထိုးလုပျတတျပွီး ပွဿနာရှာတတျတဲ့ Gink ရဲ့ အနားမှာ အေးဆေးတညျငွိမျတဲ့ Palm ဟာ ကွံရာပါအဖွဈ အမွဲတမျးရှိနတေတျပါတယျ။
Palm ဟာ Gink ကို ၁၅၀၀အခဈြနဲ့ တိတျတဆိတျခဈြနခေဲ့ပမေယျ့ relationship အဆငျ့ထဲ မဝငျဘဲ “friendzone”ထဲမှာနခွေငျးကသာလြှငျ Ginkနဲ့ ဘယျတော့မှ မပွတျတဲ့နညျးလို့ သတျမှတျထားသူပါ။
Palm တဈယောကျမသိတာကတော့ Gink ကလညျး သူ့ကို ခဈြနတေယျဆိုတာပါပဲ။ ဒါကို မသိတဲ့ Palm ဟာ Gink ကို “သူငယျခငျြးလို ခဈြပါတယျ” လို့ စကားပွော မှားသှားခဲ့ပါတယျ။
Palmပွောသှားတာတော့ စကားလေး တဈခှနျးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီတဈခှနျးကပဲ သူတို့နှဈယောကျကို နောကျဆယျနှဈအထိ ဝေးသှားစခေဲ့ပါတယျ။
နောငျဆယျနှဈနလေို့ ၂၀၁၉ရောကျတဲ့အခါ Palm လညျး ဆိုငျသူရညျးစားရှိနပွေီး Gink မှာလညျး အတူနေ ခဈြသူရှိနပေါပွီ။ ဒါပမေဲ့ Palm တဈယောကျ သူ့ရဲ့ ငယျခဈြဦး Gink ကို ဒီထကျပိုပွီး လကျလှတျဆုံးရှုံးမခံနိုငျတော့မှနျး သိလာတဲ့အခါ…. Palm အနနေဲ့ Friendzone ထဲကနေ ရုနျးထှကျနိုငျပါ့မလား….
Palm ဘကျကစပွီး Friendzone ကနျ့ခဲ့တာကွောငျ့ Palm ကို “လိုသုံး” လိုသာ သဘောထားတော့တဲ့ ခေါငျးမာသူ တဈဇှတျထိုးမိနျးကလေး Gink နဲ့ကော ပွနျနီးစပျနိုငျပါ့မလား?
Palm တဈယောကျ ဆယျနှဈလောကျ တညျဆောကျခဲ့တဲ့ Friendzone ကို Gink နဲ့ ခဈြသူတှေ ဖွဈနိုငျဖို့အတှကျ ဘယျလိုမြိုး ခဖြေကျြသှားလဲဆိုတာဟာသနဲ့ ဒရာမာ ရောနှောပွီး ကွညျ့ရှုရမှာပါ။
ဒီဇာတျလမျးကို ထိုငျး၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ မလေးရှား၊ ဟောငျကောငျနဲ့ မွနျမာနိုငျငံအထိ နိုငျငံပေါငျးစုံရဲ့ အလှဆုံး နရောတှမှော သခြော လာရိုကျသှားတာမို့ အတျောလေး ကွညျ့ပြျောတဲ့ ဇာတျလမျးတဈခုပါ။
နောကျပွီး ဒီထိုငျးရုပျရှငျရဲ့ ထူးခွားခကျြက တခွားထိုငျးဟာသ/သရုပျဆောငျတှလေို အိုဗာအိုကျတငျ၊ အိုဗာမိတျကပျအပွငျအဆငျ လုံးဝမဖွဈဘဲနဲ့ အစကနေ အဆုံးအထိ သဘာဝကကြ ခံစားရအောငျ သခြောအားထုတျထားတဲ့ ဇာတျကားပါ။
Comedy အရသာကို အပွညျ့အဝခံစားရစတေဲ့ ဒီရုပျရှငျမှာ ရိုးရှငျးတဲ့ဒိုငျယာလော့ချလေး တဈကွောငျးကအစ အူတကျနအေောငျ ရယျရပါတယျ။ ပွဿနာအိုးမလေး Gink နားမှာ တှယျကပျနရေငျးနဲ့ Palm တဈယောကျ ဘယျလိုတှေ ဒုက်ခရောကျရလဲဆိုတာကို နိုငျငံပေါငျးစုံအထိ သှားပွီး သဘာဝကကြ ရိုကျထားတာပါ။ (အကျဒျမငျဆို အရယျလှနျသှားလို့ ကိုယျ့ကိုယျကို မနညျးပွနျထိနျးရတယျ:3 )
ရယျလညျးရယျရသလို အတျောလေးလညျး ရငျထဲနငျ့နအေောငျကွကှေဲရတဲ့ ဇာတျလမျးဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ လူတှေ မမွငျကွတဲ့၊ ဟာသလို သဘောထားကွတဲ့ Friendzone သမား တဈယောကျရဲ့ ပေးဆပျမှုတှေ၊ ကွကှေဲမှု ဒုက်ခတှေ၊ မခြိတငျကဲဖွဈမှုတှကေို ဒီရုပျရှငျက ကှကျကှကျကှငျးကှငျးမွငျအောငျ ရိုကျပွထားလို့ပါပဲ။
Friendzoneထဲက ရုနျးထှကျသငျ့ မထှကျသငျ့ ဝခှေဲရခကျနသေူတှေ ဆို ဒီရုပျရှငျကွညျ့ပွီး သငျခနျးစာတှအေမြားကွီးရသှားမှာပါ။
ရုပျရှငျက နှဈနာရီတောငျကွာပမေဲ့ အခြိနျကုနျလို့ကုနျသှားမှနျး တောငျ သိလိုကျမှာမဟုတျပါဘူး။ ရုံထဲမှာ အကယျြကွီး မရယျမိဖို့ရယျ၊ မကျြရညျသုတျဖို့ တဈရှူးအဆငျ့သငျ့ဆောငျထားဖို့ပဲ ပွောပါရစေ….
Tags: #friendzone, friend, Movie, review
Aye Mon Kyaw March 7, 2019